बिर्सन र पाउन नसकेकी प्रियसीलाई पत्र | Kendrabindu Nepal Online News
11197278 529197 4325231 6342850
15259 32 9084 6143
बिर्सन र पाउन नसकेकी प्रियसीलाई पत्र
२ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०९:४६
‘न बिर्सें तिमीलाई न पाएँ तिमीलाई
बिना अर्थ दिलमा सजाएँ तिमीलाई’
सायद अन्जु पन्तले यो गीत मेरैलागि गाएकी हुन् । हो, तिमीलाई पाउन मैले के मात्रै गरिन र तर मेरो सारा अथक प्रयास बालुवामा पानी जस्तै सुकेर गयो । तिमीलाई पाउन नसक्नुको पीडाले भन्दा तिमीलाई भुल्न नसकेको पीडाले चर्चराइरहेको छ, यो मन ।
कुनै कुरा नपाउने पक्का भएपछि सम्झेर घिट्घिटाइरहनु भन्दा बिर्सिनु सही हुन्छ । हो, यही मन्त्रको मनन गर्दै तिमीलाई बिर्सिन अनेकन प्रयासहरु गरेँ । बरु म आफूलाई त्याग्न सक्ने भएँ तर अहँ तिमीलाई बिर्सिन नसक्ने भएँ । प्यार नै प्यारले भरिएको यो मनमा घृणा नै घृणाको भाव जगाउँदा पनि तिम्रो यादहरु तर्किएनन् । बरु झनै उर्लिएर यी मेरा नशा नशामा बग्न थाले ।
पहिले म तिम्रो प्रेमिल मिलनको क्रेजमा थिएँ तर अहिले विछोडको ‘डिप्रेशन’मा छु । मेरो परेलीको हरेक झिम्काइमा तिम्रो स्मृति सल्बलाउछ । यी नयनहरुले देख्ने रंगहरुमा पनि तिम्रै ‘ड्रेसअप’ झल्झल्ती आउँछ । तिमीले लगाएका कपडाको रंग मात्रै देख्दा पनि तिमी नै हो कि भनेर आँखाहरु झुक्किन्छन् र थप नियाल्न खोज्छन् विगतका स्मृतिहरु ।
पाइतालाका हरेक पदचापले तिम्रै बाटो पछ्याउँछ । तिम्रो याद आउनासाथ मेरो मुटुले धड्कनको गति नै बिर्सन्छ । यी नाकले तिम्रै सुवाशिनी खोजिरहन्छ । जता जे सुने पनि यी कानहरु तिम्रै स्वर झैं लागेर ठाडाठाडा हुन्छन् ।
मायाको पर्खाइमा रहेका मेरा निधार र गालालाई त प्याकप्याकी बनाएर गइहाल्यौ, त्यसैले सुकेका छन् तिनीहरु अचेल । तिमीलाई कसिलो र न्यानो स्पर्श दिन तम्तयार अंगालो, मिठो माया दिने यी हातका औंलाहरु पनि ‘तिमी खोई ?’ भनेर मलाई झस्काइरहन्छन् ।
मेरा हरेक अंग प्रत्यंगहरुको आशा, अभिलाषा, विश्वास, चाहनालाई विश्वाघात गरी निराशामा बदलिएर गएपछि मेरो हालत के होला ? म जस्तो अचानोको पीडा तिमी जस्ता वैगुणी खुकुरीलाई के थाहा ! कुनै बेला तिमीलाई प्यार नै प्यार गर्ने यो मन मष्तिस्कमा अचेल कहाँबाट कसरी आयो तिमीप्रतिको आवेश, आक्रोश, घृणा ?
तिमीले आफ्नो बाचा कसम नतोडेको भए, मेरो विश्वासमाथि विश्वासघातको तरवार नलगाइदिएको भए ममा यस्तो भाव आउदैनथ्यो कि ! हिमालबाट बग्ने कन्चन पानीमा मान्छेले फोहोर मिसाएपछि ‘दुषित पानी’ बने झै मेरो अटल मायामा तिमीले विश्वासघातको विष घोलेपछि ममा तिमीप्रतिको घृणाभाव जागेको हुनुपर्छ ।
त्यसैले त पहिले पहिले पत्र लेख्दा प्यार नै प्यारका शब्दहरु पोखिन्थे आज आवेश, गुनासो र असन्तुष्टीका शब्दहरु पोखिए । तिमीप्रति जूनीभर प्यारका शब्द खर्चिन चाहन्थे तर तिमीले नस्विकारेपछि मैले मात्रै चाहेर नहुने रहेछ ।
फोहोर पखाल्न त दुई हात चाहिन्छ भने एक हातले के नै पो हुन्छ र ! एकोहोरो त शंख मात्रै बज्छ, तर थाहा होला नि प्रिया त्यो अशुभको संकेत हो । माया पाउन माया दिनु पनि पर्छ र माया गर्नेले माया देखाउनु पनि पर्छ ।
कुनैबेला तिमीसँग एकपल टाढिँदा, फोन एसएमएस नुहँदा मेरा भोक प्यास, निद सबका सब हराम हुन्थे । तिमीलाई सन्चो नभएको सुन्दा मात्रै पनि म त्यसै त्यसै बिरामी हुन्थेँ । तिमीले खानपिन गरेको सुनाउँदा पनि म अघाउँथे । तिम्रो रमाइलोपन सुन्दा मलाई मज्जा लाग्थ्यो ।
तिम्रो सफलता सुन्दा घर अफिसमा मिठाइ बाँड्न मन लाग्थ्यो मलाई । तिम्रो लागि जस्तोसुकै र जेसुकै गर्न पनि हरदम तयार थिएँ म । र त तिमीलाई मैले सक्दो सहयोग गरेकै थिएँ ।
तिमीसँग गर्लम्म अंगालो हालेर मनको बाँध फुट्ने गरी रुन मन लाग्थ्यो । तिमीले रुने मौका त दियौ तर मनको होइन मुटुको बाँध फुट्ने गरी ।
अरु नपाएर होईन तिमीलाई छोड्न नसकेर तिम्रो पिछा गरेको थिएँ । मलाई तिम्रो धन, ज्यान र योग्यता होईन मायाको बदलामा माया चाहिएको थियो । जुनीभरी पिरतीकै गीत गाउने मेरो रहरलाई गुनासो नै गुनासो पोखेर जीवन विताउनुपर्ने बनाइदियौ ।
सायद तिमीलाई ठूल्ठूला कुरामा थोर थोरै खुशी हुने बानी परेछ क्यारे । तर, म स–सानो कुरामा ठूल्ठूला खुशी दिन चाहन्थे । हुन त बु्झनेलाई इसारा नै काफी छ नबुझ्नेलाई महाभारत नै घोकाएपनि एउटा कानले सुनेर अर्काे कानले उडाउने त हो । तै पनि यो मनको जिनिश जति पोख्यो उति हल्का हुँदो रहेछ ।
त्यसैले ति अतितहरु नपोखी बस्नै सकिन । मैले तिम्रो कति रहर र ईच्छाहरु पूरा गरि दिएँ । ती सबै सहयोगका लागि धन्यवाद भन्यौ न त् दुई अक्षरको सरी नै भन्यौ । यसरी एक्कासी चटक्कै बिर्सिन सक्ने तिमीलाई निस्वार्थी कसरी भनुँ म ?
यदि तिम्रो मन सफा थियो भने ति साथ र सहयोग सम्झेर पनि त एक ‘कल’ गर्न सक्थ्यौ होला नि । जूनीभर भान्छाको सम्बन्ध सम्भव नभए पनि बाटोको सम्बन्ध त सम्भव थियो होला नि । मैले तिम्रो साथ चाहेको थिएँ । त्यो बाहेक मैले तिमीबाट के स्वार्थ राखेँ र ?
तिमीले मेरो के नै रहर पूरा गरि दियौ र । तर, मेरा हर इच्छाहरु पूरा गरि दिन्छु भनेर तिमीले बाचा त गरेकी थियौ नि होइन ? आफ्नै बाचा कसम तोड्न तिमीलाई पनि कठिन हुनुपर्ने हो नि होइन र ? तिम्रो मुखबाट एउटै मात्रै कुरा सुन्न चाहन्छु, आखिर तिमी किन मलाई केही नभनि टाढियौ ? टाढिनुको एउटै कारण मात्रै भनिदिएको भए पनि त आफूलाई सम्हाल्न सक्थे नि म ।
पैसा र बैश क्षणिकको वरदान हो कान्छी । यसकोे प्रयोग गर्ने होइन सदुपयोग गर्ने हो ।
पैसा र वैशलाई च्याखे थाप्दै अरुलाई ‘युज एण्ड थ्रो’ गर्ने बानी त नराम्रो होइन र ? यस्तो बानी परेकाहरुलाई त माया, प्रेम, विश्वास, बाचा कसम पनि नाटक लाग्दो हो क्यार । आपतमा साथ दिने, आफ्नो बोली बचन नतोड्ने, धोका नदिने, विश्वासघात नगर्नेलाई पो राम्रो मान्छे भन्छन् होइन र ? फिस्स हाँसेर ठिस्स पार्ने तिम्रो स्वभावले अरुको मात्रै होइन तिम्रै जीवन पनि खाल्डोमा जाकिन सक्छ प्रिया ।
‘जीवनमा पहिलो पटक खुशीको आँसु झर्याे’, ‘तपाईले साँच्चै माया गर्दाे रहेछ’ आदि इत्यादि । तिमीले भनेका यी र यस्ता कुराहरु सम्झिँदा पनि अहिले भाउन्न हुन्छ । यस्तो नाटक मेरो जीवनमा होइन रंगमञ्चमा मञ्चन गरे पो राम्रो हुन्थ्यो निस्ठुरी । कति कठोर हृदय, कति निर्दयी मन, कति धोकेवाज सोच तिम्रो ।
तर जे होस् तिमीलाई मैले ती दुई विशेष सहयोग गर्ने अवसर पाँए । जुन अहिले सम्झिँदा पनि आनन्द लाग्छ । भौतिक शरिर र भावनात्मक मन नजिकिएर लाइफ पार्टनर बन्न नपाए पनि तिम्रो लाइफको एउटा ‘पार्ट’ बन्ने सौभाग्य पाएको छु । जब जब तिम्रो यादले आँशु तिल्पीलाउँछ तब तब म ति कुरा सम्झेर मनलाई शितलता दिने कोसिस गर्छु अचेल ।
अन्त्यमा, तिमीलाई ‘वाइफ’ बनाउने आशालाई तुषारापात गरी तिमीले मेरो ‘लाइफ’माथि जे जति ‘ब्ल्याकमेल’ गर्‍यौ त्यसबाट पाठ सिकेको छु । हुन्छ, हुन्छ भन्दा भन्दै तिमीले मलाई जुन खाल्डोमा जाक्यौ म त्यहाँबाट उत्रिने कोसिस गर्दैछु । तर बेला बेला तिम्रो यादरुपी मायाहरुले ढकनी लगाइदिन खोज्छ र पो स्वास रोकिएला कि भन्ने डर लाग्छ ।
तिमीलाई जे जति माया गर्थें नि, अझै पनि उत्तिकै गर्छु । जीवन पर्यन्त गरिरहने छु । मेरो मायामा घृणा घोलिएको तिम्रै विश्वासघाती स्वभावले हो । तर, तिमी आफ्नो गल्ती महशुस गर्न तयार भएमा म पनि ती घृणाहरु पन्छाउन तम्तयार नै छु ।
हुन त म सदा झै हरेक भ्यालेन्टाइनमा तिमीलाई उपहार टक्राउँन चाहन्थें तर यो पटक यही पत्र उपहारस्वरूप कोरेको छु । भ्यालेन्टाइन उपहार दिन तिमी नजिक पनि त हुनुपर्याे नि होइन र ?
गन्थन मन्थन कति गर्नु । म तिम्रो लागि फाटेको जुत्तासरी भएँ । तिम्रा थुप्रै जुत्ताहरुमध्ये म एक थोत्रो जुत्ता । नखिइएसम्म घिसार्नु घिसार्‍यौ र खिइसकेपछि मिल्कायौ । तिमीलाई बाल मतलव !
आफूले मन पराएकालाई ज्यान दिनुभन्दा आफूलाई मन पराउनेलाई ध्यान दिनुपर्ने रहेछ । म कुनै दिन तिमीलाई ‘सरप्राइज’ माया दिनेछु, त्यो दिन तिम्रो आँखाबाट हर्ष र पश्चातापको आँशु बग्नेछ ।
जब म मायाको भवसागरबाट उत्रेर आउनेछु तब काँडाको बदला गुलाफको फूल लिएर तिमीलाई भेटी प्रायश्चित गर्न चाहन्छु ।
तिम्रो बन्न नसकेको प्रेमी
‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ को शाब्दीक अर्थ
केन्द्रबिन्दुका समाचार संयोजक बलामी विगत १३ वर्षदेखि अनलाइन पत्रकारितामा क्रियाशिल छन् ।
प्रियसी पत्र, भ्यालेन्टाइन डे
Prevकोरोनाबाट जापानमा पनि एक जनाको मृत्यु
दुई वर्षकाे प्रगति सुनाउन आज संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनNext
आज भ्यालेन्टाइन-डे मनाईंदै : यस्तो छ सुरुवात
भ्यालेन्टाइन विक, कुन दिन के गर्ने ? (भिडियो सहित)
नेकपा स्थायी कमिटी बैठक असार २२ गते सम्म स्थगित
नेपाली सेनाका प्रवक्तामा पौडेल
ट्रयाक्टर दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु, पाँच घाइते
आज पनि ११ अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदै, कुन देशमा कसको ?
कोरोनाबाट विश्वमा पाँच लाख २९ हजार बढीको मृत्यु, संक्रमित कति ?
आईजीपी ज्ञवाली असार २४ देखि अनिवार्य अवकाशमा, को बन्ला नयाँ आईजीपी ?
गण्डकी प्रदेशमा आज पनि १६ जना कोरोना संक्रमित थपिए
गोरखामा कोरोनाका कारण आज एक जनाको मृत्यु
'कोरोना नियन्त्रणमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण' : वरिष्ठ नेता पौडेल
सनराइज बैंकद्वारा श्वेता श्री फाउण्डेशनलाई पाँच लाख सहयोग